Thiloyarmay ׀ ဖိုမ ဆက်ဆံရေးနှင့် မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးလိုရာ > သားဆက်ခြားနည်းလမ်းများ > သားကြောဖြတ်ခြင်း
တသက်တာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
အများအားဖြင့် အလျင်အမြန်ခွဲစိတ်မှုလုပ်ရပြီး ပြန်လည်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
၉၉% အကျိုးထိရောက်မှု ရှိပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အမျိုးသားတွေ သားကြောဖြတ်လို့မရပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ သားကြောဖြတ်လို့ ရပါတယ်။
Male permanent method of contraception
Female permanent method of contraception
သားကြောဖြတ်ခြင်းသည် ဆေးပညာလုပ်နည်းတွေက တဆင့်ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးပွားနိုင်မှုစွမ်းကို အပြီးထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ သားကြောဖြတ်နည်းသည် ရာသက်ပန်ကိုယ်ဝန်တားဆီးနည်းဖြစ်ပြီး ကလေးမလိုချင်တဲ့သူတွေ ကလေးထပ်မလိုချင်တော့တဲ့သူတွေ အတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သားကြောဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက် တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သားကြောဖြတ်လို့မရပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သားကြောဖြတ်လို့ရပါတယ်။ အမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သားကြောဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ အတွက်သားကြောဖြတ်ဖို့ ဆရာဝန်ဆီက သဘောတူထောက်ခံချက်လိုအပ်ပြီး ဆေးပညာဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ သဘောတူညီချက်လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတယောက် သားကြောဖြတ်ခြင်းအတွက် တိကျသေချာတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ သားကြောဖြတ်ဖို့ သဘောတူညီချက်ရတာနဲ့ ကလေးမရနိုင်ပါဘူး။
ထိရောက်မှုရှိတဲ့ တာရှည်ခံသန္ဓေတားနည်းလမ်းတွေရှိပေမဲ့ သားအိမ်ထဲထည့်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ကော့ပါးကြေးနီချောင်းနဲ့ အရေပြားအောက်ထည့်တဲ့ သန္ဓေတား အချောင်းထည့်နည်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အမျိုးသား အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် သားကြောဖြတ်ခြင်းသည် ကလေးရရှိစေရန် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ တွေ့ဆုံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သားကြောဖြတ်ခြင်းတွင် သားဥပြွန်များကိုချည်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဖြတ်ခြင်းတို့ပါဝင်ပြီး သားအိမ်ဆီသို့ သားဥများရောက်ရှိခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတယောက်အတွက် သားကြောဖြတ်ဖို့ တိကျသေချာတဲ့ အခြေအနေတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး သားကြောဖြတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားရဲ့ သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာတင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ထို့နောက် ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့သို့ သားကြောဖြတ်ဖို့ သဘောတူညီချက်ရရှိရန် စာတင်ရပါမယ်။ ဘုတ်အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင် ၂ ယောက် ကနေ ၅ ယောက်ပါဝင်ပြီး အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင်တယောက်က သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ဖြစ်ရပါမယ်။ သားကြောဖြတ်ဖို့ သဘောတူညီချက်က ၃ လမှ ၆ လကြား အချိန်ယူရတယ်။ သားကြောဖြတ်ခြင်းကို ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေမှာသာ ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။
သားကြောဖြတ်ရန် သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့ အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ သားကြောဖြတ်ရန် လျှောက်ထားချက်အရ အောက်ပါအကြောင်းရင်းများရှိရပါမယ်။
နှစ်ကြိမ် ဗိုက်ခွဲမွေးဖူးသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး
ဒေါင်လိုက် ဗိုက်ခွဲမွေးဖူးသော အမျိုးသမီး
ကလေး (၅)ယောက်နှင့်အထက် မွေးဖူးသူ
အသက်(၃၅)နှစ်ပြည့်ပြီး လက်ရှိတွင် ကလေး(၃)ယောက်ရှိသူ
အသက်(၃၈)နှစ်ပြည့်ပြီး လက်ရှိတွင် ကလေး(၂)ယောက်ရှိသူ
အသက်(၄၀)ပြည့်ပြီး လက်ရှိတွင် ကလေး(၁)ယောက်ရှိသူ
ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေများသော မျိုးဗီဇပြဿနာတခုခု အရင်ကလေးတွေမှာ ရှိခဲ့ဖူးလျှင်
ကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်လို့ မရနိုင်သော ရောဂါတခုခု ရှိနေခဲ့လျှင်
မိခင်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသော မီးယပ်ရောဂါတခုခု ရှိနေခဲ့လျှင်
ကိုယ်ဝန်ထပ်ဆောင်ဖို့ အန္တရာယ်များသော သားဖွါးခြင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေများ ရှိနေခဲ့လျှင်
သားကြောဖြတ်ခြင်းက အမျိုးသမီးတွေကို အားမနည်းစေပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဟိုမုန်းအချိုးမညီမျှမှုတွေ မဖြစ်စေပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဲ့ လိင်စိတ်အပေါ် သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။
ကိုယ်အလေးအချိန်၊ အစာစားချင်စိတ်၊ ခံတွင်းမြိန်ခြင်း သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။
ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီး နောက်နာကျင်တာ သွေးထွက်တာ ပိုးဝင်တာ အခြားရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်နိ်ုင်ပါတယ်။
သားကြောဖြတ်တာက ရှုပ်ထွေးပြီးအောင်မြင်ဖို့ခဲယဉ်းသော်လည်း တခါတရံ နဂိုအခြေအနေပြန်ရနိုင်ပါတယ်။
HIV ရောဂါပိုး AIDS နဲ့အခြားလိင်ဆက်ဆံရာကတဆင့်ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး တာဝန်ရှိသူများမှ သဘောတူညီချက် ရရှိလျှင်အမျိုးသမီးတွေသာလျှင် သားကြောဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
Letter no. – Kutha-2/Ka-24/2013/1445 : Dated 31st October, 2013.
Department of Health, Ministry of Health (meeting minutes 34/2013)